जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा के भने हल सञ्चालकले ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा के भने हल सञ्चालकले ?
कोरोना भाइरसका कारण ९ महिनादेखि बन्द रहेको सिनेमा हल शुक्रवारबाट सञ्चालनमा आएका छन् । तर, सरकारले भने सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिएको छैन । सिनेमा हल खोल्ने विषयमा सरकारले चासो नदिँदा शुक्रवारबाट हल व्यवसायीहरुले एकतर्फी रुपमा सिनेमा हल खोलेका छन् । सरकारले सिनेमा हल बन्द गर्न बल प्रयोग गरे गिरफ्तारी दिन तयार रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
शुक्रवारबाट देशभरका सिनेमा हल सञ्चालनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले हल सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेको छ । हल खोल्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरुलाई डाकेको नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले बताए । ‘अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्मा हल खोल्ने प्रस्ताव नै पुगेको रहनेछ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सिनेमा हल खोल्ने प्रस्ताव लैजाने उनले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलमा सरकारले सिनेमा हल खोल्न चासो नदेखाएपछि हामीले बाध्य भएर हल खोलेका हौं भनेर जानकारी गराएका छौं । सरकारले कानुनी रुपमा खोलिदिए राम्रो, नभए पनि हामी सिनेमा हल खोल्छौं भनेर भनेका छौं,’ उनले भने ।
उनी शुक्रवार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिनेमा विश्वस्त छन् । यस विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि सिनेमा हल खुल्ने उनले बताए । नयाँ चलचित्र प्रदर्शन नभएका कारण शुक्रवार सिनेमा हलमा दर्शकको उपस्थिति उत्साहजनक नभएको बताउँदै निर्देशक समेत रहेका शर्माले भने, ‘नयाँ चलचित्र प्रदर्शन गर्नका लागि माहोल बनाउन सिनेमा हल खोलेका हौं ।’